“तपाईलाई थाहा छ लसुनको ब्रोकाले यी ६ रोगहरुको औषधी हो ?[प्रयोग गर्ने तरिका सहित]” – Krazy NepaL
“तपाईलाई थाहा छ लसुनको ब्रोकाले यी ६ रोगहरुको औषधी हो ?[प्रयोग गर्ने तरिका सहित]”
November 12, 2020 590
काठमाडौं । लसुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागी सबै प्रकारले फाइदाजनक हुन्छ ।यसले हामीलाई सानो रोगहरु देखि लिएर ठुलठुला रोगहरुबाट पनि बचाउछ । जसलाई हाम्री दैनिक रुपमा तरकारीमा प्रयोग गर्ने गर्छौ । एउटा रोचक कुरो हामी लसुनको ब्रोकालाई केलाएर फाल्ने गर्दछौ । तर अब त्यसो नगर्नुहोस । यसको पनि धेरै यस्ता खतरनाक रोगहरुको औषधी हुन्छ । हेर्नुस्
१) लसुनको ब्रोकाको फाइदा भनेको कपाल झर्ने समस्याको रोकथाम गर्छ । यस’का लागी लसुनको बोक्रालाई पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् । यो पानीलाई मनतातो गरेर कपाल धुनुहोस् चट्टै हुन्छ ।
२) यसले तपाईको’ अनुहार’मा आएको डण्डि’फोर निको पार्छ । यसका लागी लसुनको बोक्रा’लाई पिसेर डण्डिफोर’मा लगाउनुहोस् । यसो गर्दा यसमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र एन्टी ब्याक्टेरियले यो निको हुन्छ ।
३) रुघा–खोकीबा’ट पनि छुट’कारा दिन्छ । यदि लसुन’को बोक्रला’ई पानीमा हालेर उमाले’र यस’लाई छानेर पिउँ’दा रुघा–खोकी चट्टै हुन्छ ।
४) लसुन’को ब्रोका’ले खुट्टा सुन्निएका निको हुन्छ । लसुनको बोक्रा’लाई पानीमा हालेर उमा’लेर पानीलाई मन’तातो बनाएर त्यसमा केही बेरसम्म खुट्टा राख्नुहोस् ठिक हुन्छ ।
५) लसुनको ब्रोका दमको औषधी हुन्छ । यदि लसुन’लाई पिसेर यस’मा मह मिसा’एर बिहान बेलु’का खाँदा दमको कम हुन्छ ।
६) अन्त्यमा लसुन’को बोक्रा’लाई पेष्ट बनाएर यस’मा कागती’को रस मिसा’एर कपा’लको जरामा’ लगाउँदा जुम्रा हरा’उँछ । भने छाला’मा लगा’उँदा दाद, चि’लाउने सम’स्याबाट रा’हत पाइन्छ ।
यदि दिउँसो मेकअप गरेर बस्नुभएको छ भने राति सुत्नुअघि कुनै पनि हालतमा मेकअप पखाल्नुपर्छ ।कुनै गुणस्तरीय लोसन, मेकअप रिमुभर तथा तेलले मेकअप सफा गर्नु उत्तम हुन्छ।दिनभरको धुवाँ, फोहोर, धुलोमैलो सफा गरेर मात्र सुत्नुपर्छ । त्यसका लागि हरेक दिन फेसवासले मुख धुन बिर्सनुहुँदैन ।
यो पनि पद्नुस…….
Prev“यदि तपाइको कुर्कुचा फुटेर है’रान हुनु हुन्छ ?घरेलु यो बिधि अपना’उनुस निको हुन्छ “
Nextअविवाहित महि’लाले युट्युव हेरि बच्चा ज’न्माउन खोज्दा आमा बच्चा दुुवैको ज्यान गयो [भिडियो हेर्नुहोस्]